Mithila Bhavan Heritage Big Room Family & Friends
Igumbi lakho lokulala e indlu ekumhlaba osikelwe izindlu sinombuki zindwendwe onguManoj
UMithila Bhavan yindawo yokuhlala yelifa lemveli. Yasekwa kwi-1956 kwibhotwe le-18 leminyaka elalihlala kwiRaja yaseDhanepur, omnye wabalawuli ababalulekileyo boBukhosi baseAvadh.
UMithila Bhavan wasekwa nguRam Bahadur Thakur ophuma kwingingqi yaseMithila yaseBihar naseNepal.
Ifilosofi ephambili yetempile kukusondela kulandelelwano kunye nonqulo lwehlelo ngokwembono kaSita.
Intanda-bulumko ephambili yetempile kukusondela kulandelelwano kunye nonqulo lwehlelo ngokwembono kaSita, intombi kaMithila, othathwa njengozalo lwesithixo esongamelayo sikaMithila uMahamaya Ma Syama. Ibhotwe lihlulwe libe ngamacandelo amabini, icandelo lentendelezo elakhiwe ngezitena ezincinci kunye nodaka lwe-lemon ukusuka kwinkulungwane ye-18 kunye necandelo lomsebenzi wezitena elakhiwe ngesitayela se-neo-palladian ukusuka kwi-19th inkulungwane. Ibhotwe libandakanya iimpawu ezahlukileyo ukusuka kuyilo lwe-Oudh's Perso-Mughal kunye neBaradari entle okanye iholo elineminyango eli-12 njengendawo yolwamkelo lwetempile, ukuya kwindawo yaseFrench chateau facade kunye neeyadi zaseRajput zonke ezakhiwe ngobuchule bomthonyama kunye namagcisa. Iiyadi zikwinkqubo yokubuyiselwa ngokwesiko kwaye ngoku iindwendwe zizindlu kwinkulungwane ye-19 kwindawo yabucala yosapho lwase-Aruna Sharma.
UAruna Sharma ngoku uchophela ulawulo lwetempile kwaye uye wakhokela ukubuyiselwa kwayo nomyeni wakhe ongasekhoyo uChaturbhuj Sharma. URam Bahadur Thakur wayenombono wetempile njengendawo engcwele yaseTirhut, iziko lenkcubeko yaseMaithili kunye nolwimi eNepal. Umsebenzi weNkolo kunye neNkcubeko kunye nemikhosi ibanjwe rhoqo kwitempile yaseSri Yugal Khishori ji Sarkar, isithixo setempile. Kunye neeSaligrams ezivela eNepal, itempile ibambe ilitye lentaba-mlilo likaMa Jwalamukhi elisuka eGobustan naseYanardagh kwindlela yesilika eAzerbaijan. Baye baxhasa amanyathelo obugcisa bexesha langoku kunye nenkcubeko ngaphakathi kwebhotwe kwaye sele ibambe indawo yokuhlala yabakroli kunye namanye amazwe ngamazwe. amagcisa esithubeni.
Umthandazo wemihla ngemihla kunye ne-pooja ibanjelwa kwitempile ngaphakathi kwebhotwe kabini ngemini.
Kwindawo yababingeleli yasendlini ekhoyo yokwenza iiyajnas ezifana noNavgrah Pooja, uRamraksha Pooja, uDevi kunye noShiv Pooja ngexabiso ekuxoxwe ngalo lundwendwe nomfundisi ngokuthe ngqo.
3.60 ·Izimvo eziyi-5
3.60 out of 5 stars from 5 reviews
3.60 · Izimvo eziyi-5
Zonke iindawo zenkcubeko nezenkolo ze-Ayodhya zingaphakathi kwemitha engama-400 yeradiyo yendlu yebhotwe kuquka ne-ghats yomlambo waseSaryu. Abaphathi baphinda balungiselele ukuhamba-ngelifa e-Ayodhya naseFaizabad kunye nokutyelela kwiitempile kunye needolophana eGonda, Bahraich, Barabanki, Akbarpur, Balframpur naseTulspur kufuphi neNepal ngeendleko zexabiso.
Ukukhwela kwe-non-vegetarian kungadliwa ngaphandle ngokukodwa kwimbali ye-Awadh Dum Pukht cuisine ngexesha lokutyelela eFaizabad ehlelwe kwaye ikhokelwa kanye kwinzala ye-Dowager Empress ka-Awadh Bahu Begum.
Sizama ukubonelela ngendawo yoxolo kunye nentuthuzelo yekhaya kwimisebenzi yolonwabo, ngokomoya kunye nembali. Sikwavulelekile kubantu ukuba bahlale ixesha elide kuphando kunye nokukhangela zombini imbali kunye nokomoya. Abasebenzi ngamalungu osapho abonisa ububele obungafunyanwa ngumntu ngenene e-Awadh, eyaziwa ngenkcubeko yaseGanga-Jamuni yembeko nokuthobeka.
Ibhotwe lisebenza ngeodolo yokutya kweSatvik okuyixabiso lemifuno elingenawo itswele kunye negalikhi kwaye lizama ukuba lisebenze kwisiphelo salo ngexabiso lexabiso.
Umbuki zindwendwe ngu- Manoj
Sizinze eMumbai kodwa ukuba siyafuneka sitsalela umnxeba nje.Kodwa kukho umgcini ohlala eMithila Bhavan iiyure ezingama-24.